Vaovao momba ny OnePlus: fandefasana, finday, root ary maro hafa - Androidsis | Androidsis (Pejy 3)
Ilay OnePlus 6 voamarina ao amin'ny TENAA: Efa ananantsika ny mombamomba azy. Fantaro bebe kokoa momba ny avo lenta amin'ny marika sinoa izay efa nandalo ny fanamarinana TENAA.
Ny OnePlus 6 dia hanasongadina firaketana horonantsary miadana
Ny OnePlus 6 dia hanana firaketana horonantsary miadana. Fantaro bebe kokoa momba ilay fiasa vaovao hananan'ny finday avo lenta.
Voamarina: Ny OnePlus 6 dia hanana vera averina
Ny OnePlus 6 dia hanana aoriana vita amin'ny vera. Fantaro bebe kokoa momba ny endrika avo lenta an'ny orinasa izay hatao amin'ny vera.
Ny OnePlus 6 dia tsy ho tantera-drano raha araka ny horonan-tsary vaovao
Ny OnePlus 6 dia tsy ho tantera-drano. Fantaro bebe kokoa momba ilay horonan-tsary nampakarin'ny orinasa izay manamarina fa tsy ho tantera-drano ity telefaona ity
Ny OnePlus 5T dia amidy any Eropa
Ny OnePlus 5T dia tsy misy tahiry manerana an'i Eropa. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona izay efa lafo tany Eropa, roa herinandro taorian'ny namarotany azy tany Etazonia.
OnePlus dia misintona ny OxygenOS beta farany ho an'ny maodely tohana rehetra
Ireo tovolahy ao amin'ny OnePlus dia voatery nanala ireo betsa Oxygen OS rehetra izay mbola azon'izy ireo ampiasain'ny mpampiasa an'ireo fitaovana ireo noho ny fanjifana batterie be dia be natolotr'izy ireo
Fandikana vaovao sivana an'ny famolavolana OnePlus 6. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona marika sinoa izay ho avy tsy ho ela eny an-tsena ary izay no manivana ireo sary vaovao momba ny endriny.
Ny earbuds tsy misy tariby OnePlus voalohany dia hatao hoe OnePlus Bullet Wireless ary hatolotra miaraka amin'ny OnePlus 6.
Ny OnePlus dia toa te hampiditra ny lohany ao anatin'ny sehatry ny finday tsy misy tariby ary handefa ny OnePlus Bullet Wireless miaraka amin'ny OnePlus 6.
Ny OnePlus 6 dia hamela hanafina ny fanamarihana toy ny amin'ny Huawei P20
Ny OnePlus 6 ihany koa dia hamela hanafina ny faran'ny efijery. Fantaro misimisy kokoa ny fanapahan-kevitry ny orinasa hamela ireo mpampiasa hanafina ny fijerin'ny efijery.
Ny CEO CEO OnePlus dia manambara famaritana sasany momba ny OnePlus 6
Ny CEO an'ny OnePlus dia manome fampahalalana bebe kokoa momba ny OnePlus 6. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona finday avo lenta izay tsy ho ela dia hikorontana eny an-tsena ary momba izay efa fantatsika momba ny fampahalalana bebe kokoa.
Nanivana ny vidin'ny kinova telo an'ny OnePlus 6
Nanivana ny vidin'ny kinova OnePlus 6. Jereo ny vidiny izay hananana ny kinova samihafa amin'ny finday avo lenta avy amin'ny mpanamboatra sinoa rehefa tonga eo amin'ny tsena izy io
Sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus 6: Voamarina ny lahara
Ny OnePlus 6 dia manana ny lohany: Sary ofisialy voalohany. Hijery misimisy kokoa momba ny telefaona finday avo lenta amin'ny marika sinoa izay tsy hanana toerana ambony, zavatra atahoran'ny mpampiasa maro.
Ny sary tafaporitsaka an'ny OnePlus 6 dia manambara an'i Jack 3.5mm sy USB-C
Ny OnePlus 6 dia azo jerena amin'ny sary tafaporitsaka ao amin'ny Twitter ary manambara jack audio 3.5mm, mpampitohy USB-C sy maro hafa.
Mijanona tsy amidy any Etazonia ny OnePlus 5T
Ny OnePlus 5T tsy misy tahiry any Etazonia. Fantaro bebe kokoa momba ny haavo farany izay tsy azonao vidiana intsony eto amin'ny firenena ary midika izany fa tena akaiky ny OnePlus 6.
Namoaka ny antsipirian'ny OnePlus 6. Fantaro bebe kokoa momba ny famaritana ny finday avo lenta vaovao an'ny marika sinoa efa tafaporitsaka,
Jack headphone eny, jack headphone tsia ho an'ny OnePlus
Ny tsy fisian'ny jack headphone dia toa mijanona ho olana amin'ny mpampiasa maro, farafaharatsiny izany no asehon'ny fanadihadiana nataon'ny CEO OnePlus farany teo.
Ny valin'ny benchmark an'ny OnePlus 6 dia mihoatra ny mpifaninana aminy. Fantaro bebe kokoa ny isa azon'ny telefaona tamin'ireo fitsapana ireo.
Ny mpanamboatra farany izay toa mandika ny notch an'ny iPhone X dia OnePlus araka ny sary voalohany navoakan'ny maodeliny manaraka.
OnePlus dia manana fihetsika ratsy raha ny resaka trolling Xiaomi no resahina
OnePlus dia te-hivezivezy Xiaomi taorian'ny tsy fahombiazan'ny fanadihadiana nataon'ny orinasa Aziatika mba hahitana hoe inona ny safidin'ny personalization an'ireo terminal ao aminy.
OnePlus dia mampitombo ny tombony azony ao anatin'ny herintaona
OnePlus dia nahavita nampitombo ny tombony azony tao anatin'ny herintaona. Fantaro bebe kokoa ny valin'ny orinasa izay miaina fotoana tena tsara.
Raiso ny OnePlus 5T 6GB / 64GB amin'ny € 422.99 fotsiny fa tsy € 499 amin'ny GearBest
Ny OnePlus 5T dia nidina ho an'ny 15 isan-jato mahery amin'ny GearBest. Raha te hanana an'ity terminal farany avo lenta ity ianao dia ataovy haingana araka izay azo atao satria fotoana voafetra ihany io! Manome anao ny antsipiriany izahay.
Ny telefaona OnePlus vaovao dia ho tonga amin'ny faran'ny telovolana faharoa. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao avy amin'ny marika sinoa izay ho tonga amin'ny volana Jona.
Ity misy sary maromaro avy amin'ny sarimihetsika Star Wars farany: Episode VIII The Last Jedi
Fihenam-bidy manokana amin'ny OnePlus 5T ao Banggood. Fantaro bebe kokoa momba ity fihenam-bidy manokana misy ao amin'ny OnePlus 5T hatramin'ny 8 desambra ity.
OnePlus 5T Star Wars Edition nanambara. Hijery misimisy kokoa momba ity kinova farany ambony an'ny marika sinoa ity izay hanomboka amin'ny 16 desambra ity.
OnePlus 5T dia nanambara tamin'ny mena mena
Ny OnePlus 5T dia ambara ao amin'ny Lava Red. Fantaro bebe kokoa momba ny kinova vaovao an'ny OnePlus 5T amin'ity loko mena lava vaovao ity.
Ny endrika famolavolana ny OnePlus 6 dia miseho amin'ny horonantsary
Na dia teo amin'ny tsena aza ny OnePlus 5T, ny OnePlus 6 dia nanomboka nanao lohateny lehibe noho ny fisehoana ny famolavolana hevitra
Ny beta voalohany an'ny Android Oreo ho an'ny OnePlus 5 dia efa misy izao
Ny fanavaozana efa ela nandrasana OnePlus 5 ho an'ny Android Oreo dia navotsotra tamin'ny beta ho an'ireo mpampiasa rehetra liana amin'ny fametrahana azy.
Ny Sony XZ dia manomboka mandray Android Oreo
Ny faritra Sony XZ dia nanomboka nahazo ny fanavaozana izay nandrasan'ireo mpampiasa ireo, izay ahafahan'izy ireo mankafy ny Android Oreo
Ny OnePlus 5 dia hahazo ny fankasitrahana ny OnePlus 5T amin'ny fanavaozana ho avy
Vaovao mahafaly ho an'ny mpampiasa OnePlus 5 dia ny fahatongavan'ny rafitra ekipa tarehy OnePlus 5T ho eo alohany
Ny OnPlus 5T dia mandalo fitsapana fiaretana malaza indrindra, handalo izany ve? Fantaro bebe kokoa momba ny fitsapana fiaretana maharitra OnePlus 5T.
Sintomy ny sary an-tsary an'ny OnePlus 5T vaovao
Raha te-misintona ny sary mombamomba ny OnePlus 5T vaovao ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia avelanay anao ireo rohy hampidina azy ireo amin'ny vahaolana 4k.
Ny OnePlus 5T dia ofisialy izao: Fantaro ny antsipiriany rehetra
Fantaro bebe kokoa momba ny OnePlus 5T, izay efa naseho tamin'ny fomba ofisialy. Efa fantatsika ny pitsony feno, ny vidiny ary ny misy azy.
5 andro talohan'ny fampisehoana ofisialy ny OnePlus 5T, vao nasiana sivana ny sary tena izy an'ny terminal.
OnePlus dia mamoaka ny sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus 5T
Sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus 5T nambaran'i OnePlus. Ny marika sinoa dia mamoaka ny sary voalohany an'ny haitao vaovao.
Ny OnePlus 5T dia mety hanana fakan-tsary mihoa-pampana amin'ny indostria
Ny antsipiriany ofisialy voalohany an'ny OnePlus 5T, izay ho tonga miaraka amina RAM 8GB, fakan-tsary miisa 20 megapixel ary fakan-tsary 18: 9.
Toa andrasana amin'ny taona ho avy ny OnePlus 6 ary haseho amin'ny fiandohan'ny taona 2018. Ampahafantarinay ny mety ho fikafika teknika mety hitranga.
Ny OnePlus 5 dia hanana fanontana manokana
Ny mpanamboatra smartphone OnePlus dia miara-miasa amin'ny mpamorona lamaody Jean-Charles de Castelbaja hamorona fanontana voafetra OnePlus 5
Azonao atao izao ny mahazo ny 5GB OnePlus 128 amin'ny Slate Grey
Ny orinasa sinoa dia manitatra ny katalaoginy amin'ny alàlan'ny fampahafantarana ny sainam-panahiny OnePlus 5 miaraka amin'ny fahafaha-manana 128 GB amin'ny famaranana vaovao, Salte Gray
Android O no fanavaozana farany an'ny OnePlus 3
Voamarina fa ny OnePlus 3 sy ny OnePlus 3T dia hahazo Android O na dia izany aza ny fanavaozana lehibe farany. Veloma amin'ny Android P?
Ny orinasa sinoa dia manambara amin'ny mombamomba azy amin'ny Facebook ny fahatongavan'ny variana vaovao amin'ny OnePlus 5 izay mety ho loko mena, volamena na unicorn
OnePlus 5 vs OnePlus 3T vs OnePlus 3 - fahasamihafana lehibe
Mampitaha ny famaritana ny OnePlus 5 vaovao amin'ireo teo alohany izahay, ny OnePlus 3T ary ny OnePlus 3. Aza adino ity famakafakana fampitahana fohy ity.
Ny zava-drehetra momba ny Oneplus 5 vaovao: famaritana ara-teknika sy ny vidiny
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny OnePlus 5 vaovao, ao anatin'izany ny mombamomba azy manokana, ny vidiny, ary ny fampahalalana momba azy io.
Ny dokambarotra voalohany amin'ny fahitalavitra an'ny OnePlus 5 dia nalefa tany India
Ny doka fahitalavitra vaovao ho an'ny OnePlus 5 dia mampiseho ny smartphone manontolo. Ny famoahana ofisialy ny OnePlus 5 dia kasaina hatao ny 20 Jona.
Sivanina ny pitsopitsony sy ny vidin'ny OnePlus 5
Ny toetra ara-teknika, ny vidiny ary ny fanomezana vaovao an'ny OnePlus 5 manaraka miaraka amin'ny Snapdragon 835 sy fakan-tsary miverina aoriana dia niseho tamina tranonkala.
Vaovao ratsy! Ny OnePlus 2 dia TSY hahazo ny fanavaozana ny Android Nougat
Ny orinasa OnePlus dia manamafy fa ny OnePlus 2 dia tsy handray Android Nougat, na dia latsaky ny 2 taona aza izy ary nampanantena mazava izany
Fanontana ofisialy voalohany an'ny OnePlus 5
Nanapa-kevitra ny OnePlus ny hamoaka ny sary ofisialy voalohany an'ny OnePlus 5, ny sainam-bolony vaovao izay haseho amin'ny 20 Jona miaraka amin'ny fakan-tsary roa sy SD 835.
Ny OnePlus 5 miaraka amin'ny RAM 8GB dia hamidy amin'ny 22 Jona
Amazon India dia namoaka sary fampiroboroboana maodely OnePlus 5 miaraka amin'ny RAM 8GB izay hamidy amin'ny 22 Jona.
Taorian'ny fivoahan'ny sary voalohany an'ny OnePlus 5, maro no nahatsikaritra fa ny sainan'ny OnePlus vaovao dia manana fitoviana lehibe amin'ny Oppo R11.
Ny fanombohana OnePlus 5 dia nohamafisina tamin'ny 20 Jona
Ny mpanamboatra smartphone OnePlus dia manamafy ny fanombohana ny smartphone manaraka, ny OnePlus 5, ho an'ny 20 Jona
Azonao atao izao ny misintona ny sary ofisialy OnePlus 5
Ny sary ofisialy OnePlus 5 ofisialy izao dia azo sintonina maimaim-poana ary azo ampiasaina amin'ny finday rehetra.
Ny OnePlus 3 sy OnePlus 3T dia hahazo Android O
Vao haingana ny CEO an'ny OnePlus dia nanamafy fa ny telefaona OnePlus 3 sy OnePlus 3T dia hahazo ny Android manaraka, antsoina hoe Android O.
Ny OnePlus 5 dia haseho amin'ny 15 Jona, araka ny afisy tafaporitsaka
Ny OnePlus 5 dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 15 Jona, araka ny afisy navoaka tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy.
Ny programa referansa OnePlus vaovao dia hanome anao fihenam-bidy ho an'ny fividianana smartphone manaraka, mety raha mikasa ny hividy OnePlus 5 ianao.
Ny OnePlus 3T dia hatsahatra amin'ny 1 Jona any Eropa
Ny OnePlus 3T dia hitsahatra tsy hamidy any Eropa amin'ny 1 Jona, araka ny nanamafisan'ny orinasa sinoa tamina lahatsoratra vao haingana.
Ny OnePlus 5 dia hanana Snapdragon 835 ary manatsara ny fahamaotinana mikasika
Ny sainam-pirenena OnePlus manaraka, antsoina hoe OnePlus 5, dia ho tonga amin'ity fahavaratra ity miaraka amin'ny processeur Snapdragon 835 ary ny latency touch optimisé.
Ny Oneplus 5 dia hanana ny teknolojia DxO ao amin'ny fakan-tsariny
Ireo fakan-tsary tafiditra ao amin'ny Oneplus 5 dia hanana teknolojia DxO izay mety ho lasa benchmark amin'ny sary nomerika
Ny OnePlus 5 mamafa ny Galaxy S8 sy Xperia XZ Premium amin'ny Geekbench
Ny OnePlus 5 dia nandalo fitsapana fampisehoana Geekbench, izay nahitany ny Galaxy S8 sy Sony Xperia XZ Premium.
OnePlus dia manakana ny 3GB OnePlus 128T ary mamoaka ny teaser voalohany an'ny OnePlus 5
OnePlus dia nijanona tsy nivarotra ny maodely 128GB an'ny OnePlus 3T, tamin'ny fotoana namoahana ilay teaser voalohany amin'ny hazakazaka manaraka azy, ny OnePlus 5.
OnePlus 5: Izay fantatsika rehetra hatreto
Ho avy tsy ho ela ny OnePlus 5 hifaninana amin'ny Galaxy S8, LG G6 ary finday avo lenta hafa, saingy ho mora kokoa izy io ary hanana fampisehoana mitovy aminy.
Sary maromaro voalaza fa nalaina niaraka tamin'ny OnePlus 5 no tafaporitsaka
Sary marobe hita fa nalaina niaraka tamin'ny fakantsary OnePlus 5 no tafaporitsaka tato amin'ny tranonkala vao haingana, ary manondro fakan-tsary roa mety hitranga eo amin'ny terminal.
Ny sary voalohany an'ny OnePlus 5 dia manamafy ny fisian'ny fakantsary roa aoriana
Farany, voamarina fa ny OnePlus 5 dia hanana fakantsary aoriana roa, ankoatry ny fiasa hafa toa ny Snapdragon 835 SoC ary farafahakeliny 6GB RAM.
Vidio ny Xiaomi Mi 6 na miandry ny OnePlus 5?
Ny Xiaomi Mi 6 dia misy amin'ny 6GB RAM, processeur Snapdragon 835, fakan-tsary roa ary vidiny mahagaga. Fa ahoana ny OnePlus 5? Ho tsara sa ho ratsy kokoa?
Ny famaritana OnePlus 5 dia tafaporitsaka
Ny OnePlus 5 ho avy dia hifaninana amin'ny Galaxy S8 sy LG G6 noho ny endrika nohavaozina sy ny endriny tsara kokoa: Snapdragon 835, 8GB RAM, ary maro hafa.
OnePlus 2 dia mahazo kinova OxygenOS vaovao, saingy manohitra ny Android Nougat
Ny smartphone OnePlus 2 dia mahazo ny fanavaozana ny OxygenOS izay misy fanatsarana isan-karazany, na eo aza izany mbola miandry ny Toug Nougat
Amin'ny 7 Janoary, hanokatra ny 'traikefa' fivarotana ara-batana voalohany any India ny OnePlus
Izy io dia ho fivarotana 'traikefa', voalohany ho an'ny OnePlus any India. Fivarotana ara-batana ahafahanao mividy ny sasany amin'ireo terminal.
Ny OnePlus 3 sy 3T dia mahazo ny fanavaozana ofisialy Nougat
Amin'ny alàlan'ny OTA, ny fanavaozana Nougat ho an'ny OnePlus 3 sy OnePlus 3T dia tokony ho tonga ireo andro ireo taorian'ny nanambarana azy ireo.
Raha manana OnePlus 3 ianao dia efa afaka mahazo Android 7.0 amin'ny beta misokatra
Ireo izay te-hiezaka hametraka ny beta an'ny Android 7.0 Nougat ao amin'ny OnePlus 3, dia efa manana fotoana hanaovana izany.
Ity no unboxing tsy mendrika indrindra hitanao
OnePlus dia nanao unboxing hafahafa, mahatsikaiky ary adala izay efa hitanao nandritra ny fotoana fohy avy amin'ny OnePlus 3T nanolotra azy tany Eropa.
OnePlus 3 dia mandray OxygenOS 3.2.8 miaraka amin'ny fandraketana horonantsary 1080p 60fps ary maro hafa
Ao amin'ny kinova 3.2.8 an'ny firaketana horonantsary OxygenOS 1080 amin'ny 60FPS no avela ary "bokotra panic" no nampiana ho an'i India.
Ny varotra OnePlus 3 dia nitsahatra tamin'ny fomba ofisialy tany Etazonia sy Eropa
Rehefa avy nandefa ny OnePlus 3T, ilay kinova nohavaozina amin'ny sainam-pirenena, omaly, ny OnePlus 3 dia tsy azo vidiana amin'ny Internet intsony.
Ny OnePlus 3T dia mety ho telefaona voalohany misy RAM 8GB
Amin'ny 15 Novambra, haseho ny OnePlus 3T, telefaona iray fantatra ankehitriny, noho ny tsaho iray, mety hanana RAM 8 GB izy io.
OnePlus 3 dia hanana Android Nougat beta amin'ity volana ity ary ny farany amin'ny volana Desambra
OnePlus 3 dia hahazo ny kinova beta an'ny Android 7.0 Nougat amin'ity volana ity, ary ny kinova farany dia ho tonga amin'ny faran'ny taona.
OnePlus 3T miaraka amin'ny Snapdragon 821 havoaka amin'ny 15 Novambra
Ny chip Qualcomm's Snapdragon 821 no ho mpiorina voalohany amin'ilay telefaona vaovao avy amin'ilay orinasa antsoina hoe OnePlus: ny OnePlus 3T
OnePlus 3T miaraka amin'ny chip Snapdragon 821 ho avy tsy ho ela
OnePlus dia hamoaka ny fanavaozana ny fitaovana OnePlus 3 miaraka amin'ny 3T. Hanana ny puce Snapdragon 821 ho an'ny telefaona iray izay saika hitovy amin'ilay tany am-boalohany.
OnePlus dia namoaka ny fananganana Android Marshmallow voalohany ho an'ny OnePlus X
OnePlus X no ambaratonga fidiran'ity orinasa ity izay vao avy namoaka ny rindrambaiko voalohany ho an'ny Adroid 6.0.1, na dia avy amin'ny fiarahamonina aza
Tonga ny OxygenOS 3.2.2 miaraka amin'ny fanatsarana an'i Doze ary bebe kokoa ho an'ny OnePlus 3
Ny OnePlus 3 dia efa mandray ny fanavaozana ny firmware OxygenOS 3.2.2 izay mitondra fanatsarana miharihary ho an'ny doze sy ny sasany vitsivitsy.
Vonona, apetraka, handeha !!. Niverina tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny OnePlus 3 ny fanavaozana ny OTA
Aorian'ny asa mafy mandritra ny 24 ora dia afaka manambara izahay fa miverina ny fanavaozana ny OTA ho an'ny OnePlus 3.
OnePlus 3 no manjaka ankehitriny ao amin'ny AnTuTu
AnTuTu dia namoaka ny lisitry ny finday avo lenta 10 amin'ny fampisehoana hatramin'ny tapaky ny taona 2016, ary ny OnePlus 3 no voalohany amin'izy ireo.
OnePlus dia manakana ny fanavaozana Oxygen OS 3.2.0 ho an'ny OnePlus 3
Ny OnePlus 3 dia nahazo ny fanavaozana Oxyen OS 3.2.0 roa andro lasa izay ary izao dia nijanona noho ny olana rehefa nametraka azy.
Oneplus dia mamoaka ny fanavaozana Oxygen OS 3.2.0 amin'ny alàlan'ny OTA ho an'ny OnePlus 3
Ny fanavaozana ny OxygenOS 3.2.0 vaovao amin'ny alàlan'ny OTA ho an'ny Oneplus 3 dia vonona izao, OTA izay manitsy ny olan'ny RAM ary feno vaovao.
Ny OnePlus 3 dia manana olana amin'ny fitantanana fitadidiana miaraka amin'ny RAM 6GB
Natomboka omaly ny OnePlus 3 ary tamin'ny fitsapana haingana dia hita fa tsy mitahiry tsara ireo rindrambaiko amin'ny 6GB RAM misy azy io.
OnePlus dia nanazava mazava fa ny fampiasana ny fast charge an'ny OnePlus 3 dia tsy maintsy mampiasa ny charger tafiditra ao ianao, satria tsy ho vita amin'ny hafa izany.
Ny CEO, Pete Lau, dia nanamafy fa tsy handefa OnePlus X intsony izy ireo ary hifantoka amin'ny laharam-pahamehan'izy ireo toy ny OnePlus 3.
Ny OnePlus 3 dia efa azon'ny rehetra ofisialy
Ny OnePlus 3 dia azo vidiana amin'ny tranokala ofisialiny ho an'ny telefaona misy puce Snapdragon 820, RAM 6GB ary fahatsiarovana anatiny 64GB.
Ny kinova an'ny OnePlus 3 misy RAM 6GB dia hita ao amin'ny GFXBench
Ny OnePlus 3 dia miseho ankehitriny ao amin'ny kinova RAM 6GB avy amin'ny GFXBench, fitaovana fampiasa mahazatra.
Ny ohatra voalohany amin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny OnePlus 3 dia hita
Ny CEO an'ny Oneplus dia nizara tamin'ny iray amin'ireo kaonty sosialiny ireo sary telo voalohany nalaina tamin'ity terminal ity izay haseho amin'ny 14 Jona
OnePlus 3 no telefaona voalohany an'ny orinasa izay azo vidiana tsy misy fanasana avy amin'i Amazon; tonga izao ny teaserany voalohany.
Azonao atao ny mividy ny OnePlus 3 nefa tsy manana fanasana
OnePlus 3 dia hanana fanombohana manokana amin'ny zava-misy virtoaly ary azo vidiana avy aminy voalohany tsy misy fanasana.
Ny 15 Jona no daty fandefasana ny OnePlus 3
Amin'ny hetsika iray any Shina, ny OnePlus 3 dia havoaka amin'ny 15 Jona amin'ny fampisehoana tena manokana, tanterahina amin'ny zava-misy virtoaly.
Oneplus dia mampihena ny vidin'ny telefaona rehetra ao aminy
Manoloana ny fahatongavan'ny OnePlus 3 tsy ho ela, dia nanapa-kevitra ny OnePlus fa hampihena ny vidin'ny OnePlus One, OnePlus 2 ary OnePlus X, izay kely eo anelanelan'ny 30 sy 50 euro.
Ny OnePlus dia tsy maintsy namakivaky ny TENAA mba handray ny dingana farany alohan'ny hanehoana azy amin'ny fiandohan'ny volana Jona.
Ny CEO an'ny OnePlus dia namoaka selfie nalaina niaraka tamin'ny OnePlus 3
Ny Tale Jeneralin'ny OnePlus dia te-hidina amin'ny fiaran-dalamby misy sary selfie nalaina niaraka tamin'ny fakantsary voalohany an'ny OnePlus 3 mihitsy
Amin'ity sary an-gazety ity dia afaka mahita ny OnePlus 3 ho toy ny telefaona amin'ny ambaratonga avo amin'ny resaka fomba sy ny endrika izy.
Sary roa azo atao amin'ny OnePlus 3 no voasivana
Ny OnePlus 3 dia iray amin'ireo terminal mora vidy indrindra andrasana amin'ny taona ho an'ny famoahana ho an'ny volana Jona. Manana sary 2 izahay izao.
Ny 2GB OnePlus 16 dia nanjavona tao amin'ny fivarotana OnePlus
Nanapa-kevitra ny OnePlus fa tsy hivarotra ny 2 GB OnePlus 16 any Eropa, Etazonia ary Grande-Bretagne noho ny fangatahana ambany amin'ity kinova ity.
OnePlus One dia mandray OxygenOS 2.1.4, asehonay anao ny fomba fametrahana azy
OnePlus One izao dia azo havaozina amin'ny Oxigen 2.1.4, asehonay anao ny dingana rehetra tsikelikely mba hanaovana azy haingana sy mora
Ny ekipa OnePlus dia mampianatra anao ny fomba famongorana ny fitaovanao
Ny ekipan'ny fampandrosoana OnePlus dia namoaka horonantsary mampiseho ny fomba famongorana ny iray amin'ireo fitaovany, indrindra ny OnePlus 2.
Ny variant an'ny OnePlus X dia namakivaky ny TENAA miaraka amin'ny efijery FHD 4,99-inch sy Snapdragon 810
Ny puce Snapdragon 810 dia saika hitantsika fa io no kintan'ity karazany vaovao an'ny OnePlus X ity izay nandalo ny TENAA androany
Ahoana ny fanavaozana ny Oneplus X amin'ny tanana ary tsy very ny fiantohana ofisialy
Ampianarina anao izahay anio manavao ny Oneplus X amin'ny tanana ary tsy very ny fiantohana ofisialin'ny terminal.
OnePlus 2 Mini dia hiseho amin'ny efijery 4,6-inch sy Snapdragon 810 puce
Ny OnePlus 2 Mini no zavatra manaraka avy amin'ity marika ity izay nahavita nahita fifandanjana ampy handefasana terminal avo lenta amin'ny vidiny lafo
Ny fandikana voalohany ny OnePlus 3 dia miseho, izay misy terminal iray mitovy amin'ny OnePlus 2 no jerena, saingy misy ny tsy fitovizany.
[BlackFriday] Vidio ny OnePlus 2 na OnePlus X tsy misy fanasana
Tamin'ny fahatongavan'ilay BlackFriday malaza dia nanapa-kevitra ny OnePlus fa hanokatra ny fividianana ny terminal-ny tsy misy fanasana.
OnePlus X Ceramic Edition, ny fanontana voafetra dia hivoaka amin'ny 24 Novambra
OnePlus dia handefa kinova voafetra amin'ny terminal kely indrindra, ny OnePlus X. Ity fitaovana ity dia hamidy amin'ny 24 Novambra.
Andramo LG G2 VS Oneplus VS Mi4c: Trio an'ny aces atrehana
Trio an'ny aces miatrika ity fitsapana haingana Androidsis LG G2 VS Oneplus VS Mi4c ity
OnePlus X dia efa ofisialy amin'ny elanelam-potoana faran'izay tsara indrindra
OnePlus dia ho tonga amin'ny 5 Novambra miaraka amin'ny rafitra fanasana izay haharitra amin'ny volana voalohany indrindra ary avy eo dia azonao atao ny mividy azy amin'ny tranonkala
Hatramin'izao dia ny vidiny ofisialy any Shina ihany no fantatray, 240 euro hanovana, noho ny afisy namoaka. Ankehitriny dia misy andiana afisy vaovao mampiseho amintsika ireo toetra ara-teknika rehetra an'ny telefaona OnePlus X. Ary tsia, tsy ho gaga izahay.
Fitsapana hafainganam-pandeha Androidsis: LG G2 VS Oneplus 2
Fitsapana hafainganam-pandeha Androidsis vaovao hiatrehantsika ny LG G2 VS Oneplus 2. Iza no handresy amin'ny ady?
Fitsapana hafainganam-pandeha Androidsis: Oneplus 2 VS Xiaomi Mi4c
Androany isika dia miatrika ny Oneplus 2 VS Xiaomi Mi4c hijerena raha misy fahasamihafana toy izany amin'ny fampiasana isan'andro ireo terminal Android roa nosasarian'ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny vidiny, na dia tsy amin'ny antsipirian'ny teknika aza.
Ny fanasana OnePlus 2 dia tapitra ao anatin'ny 3 andro
Hatramin'izao, ny fanasana hividy OnePlus 2 dia tapitra tapitra taorian'ny 24 ora. Ankehitriny dia nanapa-kevitra ny mpanamboatra sinoa fa tapitra ny fe-potoana afaka 3 andro.
Fitsapana hafainganam-pandeha eo anelanelan'ny OnePlus One sy OnePlus Two, tena ilaina ve ny fahasamihafana?
Izahay dia manome anao fitsapana hafainganam-pandeha tanteraka eo anelanelan'ny OnePlus One sy ny OnePlus Two izay anehoanay anao ny tsy fitovizan'ny fahombiazan'ny telefaona roa
Ny famaritana OnePlus X dia tafaporitsaka tanteraka
Ny famaritana ny terminal kely indrindra an'ny mpanamboatra sinoa, ny OnePlus X, dia efa fantatra.
OnePlus dia manome anao OnePlus 2 ho takalon'ny sainam-pirenena Samsung
OnePlus dia manana hetsika vaovao hisarika ny mpampiasa, manome ny OnePlus 2 ho takalon'ny Samsung. Te hahafantatra bebe kokoa momba an'ity fampiroboroboana ity ve ianao?
Vonona ny zava-drehetra amin'ny fampisehoana ny OnePlus X amin'ny 29 Oktobra
OnePlus dia efa manana ny zava-drehetra vonona hanolotra ny findainy OnePlus X vaovao amin'ny 29 Oktobra, izay hiavaka amin'ny fisehoana an-tsary tena tsara.
OnePlus X, sary tafaporitsaka
Ny fitaovana manaraka avy amin'ny mpanamboatra sinoa dia ny OnePlus X. Efa nahare zavatra betsaka momba ity fitaovana ity izahay ary ankehitriny dia mahita ireo sary nivoahana voalohany.
OnePlus 2 tsy nasaina androany nandritra ny adiny iray
Ny OnePlus 2 dia iray amin'ireo fitaovana izay miteraka hatezerana indrindra amin'ity taona ity. Betsaka ny resaka ...
OnePlus dia manomana hetsika amin'ny 12 Oktobra, OnePlus X?
OnePlus dia manana hetsika voaomana amin'ny 12 Oktobra ho avy izao. Amin'ity hetsika ity, ny mpanamboatra sinoa dia afaka mampiseho ny fantsony vaovao, ny OnePlus X.
Ny tsaho momba ny OnePlus Mini dia miverina am-kery, ireo ve no toetra mampiavaka azy?
Nisy andiana toetra ara-teknika navoaka izay mety an'ny OnePlus Mini, finday afovoany vaovao an'ny OnePlus
OnePlus X, dia ho tonga amin'ny volana oktobra
OnePlus dia mikasa ny handefa fitaovana vaovao alohan'ny faran'ny taona. OnePlus X no anarany ary ho tonga amin'ny volana oktobra ho avy izao.
Ahoana ny fanavaozana ny Oneplus 2 mankany Oxygen OS 2.1 amin'ny tanana
Efa misy eto amintsika ny fanavaozana vaovao ny Oxygen OS 2.1 ho an'ny Oneplus 2, fanavaozana misy fanatsarana lehibe amin'ny fakan-tsary, galeriana ary fampisehoana terminal.
Oneplus X, ilay Oneplus 2 mini izay ho tonga amin'ny volana oktobra ary mety ho 220 Euros izany
Ny sary voalohany dia voasivana amin'ny mety ho Oneplus 2 Mini vaovao izay ho tonga amin'ny vidiny 220 euro.
Fampitahana sy fitsapana haingana Moto X Play VS Oneplus 2.
OnePlus dia namoaka sary dokambarotra izay nanambarany fa misy fividianana rendrarendra kely. Iza no mety ho?
Ahoana ny fanavaozana ny Oneplus 2 mankany Oxygen OS 2.0.2 amin'ny tanana
Anio dia asehonay anao ny fanavaozana ny Oneplus 2 mankany amin'ny Oxygen OS 2.0.2 tanana alohan'ny fampandrenesana ofisialy ny kinova Oxygen Os vaovao misy.
Androany aho dia manazava ny fomba famahana ny olan'ny fanavaozana Oneplus 2 amin'ny alàlan'ny OTA nefa tsy very ny fiantohana ofisialy momba ny vokatra.
OnePlus 2 dia mahazo ny fanavaozana voalohany amin'ny alàlan'ny OTA mba hamahana ny lavaka lehibe amin'ny Android, Stagefright.
Ity no OnePlus 2 ao anaty noho ny iFixit
IFixit, orinasa iray manampahaizana manokana amin'ny famongorana finday, dia nanala tanteraka ilay OnePlus 2. Te-hahita ny endrik'ilay OnePlus 2 ao anatiny ve ianao?
Azonao atao izao ny mividy ny OnePlus 2 tsy misy fanasana
Te hividy ny OnePlus 2 tsy misy fanasana ve ianao? Everbuying dia efa manana izany amin'ny Stock ho an'ny fandefasana entana miaraka amin'ny vidin'ny fandefasana ary amin'ny vidiny mifaninana mihoatra ny vidiny.
Paikady fivarotana vaovao: OnePlus 2 ho lavanty amin'ny Ebay ho an'ny fiantrana
Ireo fanasana OnePlus voatsikera dia nitady ny hamidy bebe kokoa ny tenany noho ny lavanty fiantrana ao amin'ny Ebay ho an'ny OnePlus 2.
OnePlus dia manamboatra smartphone fahatelo izay hivoaka alohan'ny faran'ny taona, OnePlus Mini?
Ny orinasa sinoa OnePlus dia manana finday avo lenta fahatelo amin'ny tanany amin'ny faran'ny taona, ho ilay OnePlus Mini resabe ve?
Famandrihana maherin'ny 750.000 ho an'ny OnePlus 2
Efa misy famandrihana mihoatra ny 750.000 ho an'ny OnePlus 2, telefaona iray izay mety hihoatra ny fahombiazan'ny maodely OnePlus voalohany
Ahoana ny fomba hahazoana fanasana hividy ny OnePlus 2
Atorinay anao ny fomba hahazoana fanasana hividy ny OnePlus 2 amin'ny 11 Aogositra rehefa alefa.
OnePlus 2 izao dia ofisialy: 4GB RAM ary fitehirizana 64GB amin'ny € 399 ary 3GB / 16GB amin'ny € 339
OnePlus 2 dia nambara tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny kinova roa, ny iray misy 3GB RAM ary fitehirizana 16GB ho an'ny € 339 ary ny 4GB / 64GB hafa ho an'ny 399 €.
Ny OnePlus 2 dia voasivana amin'ny antsipiriany ora maro alohan'ny fampisehoana ofisialy azy.
OnePlus dia manokatra ny famandrihana fanasana hahazoana ny OnePlus 2
Andro vitsy sisa no hahitana ny finday avo lenta amin'ny fanombohana sinoa kely. Izany no antony nanokafan'ny OnePlus ny famandrihana fanasana.
OnePlus Ones 1.5 tapitrisa namidy hatramin'ny nanombohany
Hiseho ny OnePlus 2. Amin'ny herinandro ambony dia ho fantatsika ny tsiambaratelo rehetra amin'ny sainam-pirenena vaovao an'ny orinasa mpamokatra Aziatika.
OnePlus 2 dia mandalo ny TENNA manamafy ny toetra teknika rehetra
Oneplus 2 dia mandalo ny TENNA mampiseho ny toetra ara-teknika rehetra amin'ny faneva vaovao an'ny mpanamboatra Aziatika
OnePlus dia afaka mandefa OnePlus Two Mini
Tsaho vaovao iray dia tonga herinandro maromaro alohan'ny fanolorana ny fitaovana vaovao OnePlus Two. Raha ny filazan'ity tsaho ity dia hisy OnePlus Two Mini hivoatra.
OnePlus dia mety mikasa ny hampiditra kinova telo samihafa amin'ny OnePlus Two. Ny mahasamihafa azy ireo? Fahatsiarovana RAM
Teaser vaovao navoaka vaovao iray dia manamafy fa ny OnePlus 2 vaovao, izay haseho amin'ny 27 Jolay, dia hampiditra sensor ho an'ny dian-tànana
Ity no mety ho sary voalohany an'ny OnePlus 2
Ny sary iray dia mivoaka amin'ny mety ho OnePlus 2 heverina.
OnePlus dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa ny OnePlus 2 manaraka dia hampiditra kinova nohatsaraina ho an'ny SoC fanta-daza, ny Snapdragon 810 v2.1.
OnePlus 11 hevitra mahaliana
Na dia tsy tonga aza ny OnePlus 2, avelan'ny mpamorona hafahafa hihorakoraka ny fisainany amin'ny famoronana foto-kevitra finday, toy ny nitranga tamin'ny OnePlus 11.
OnePlus 2 teaser ary antsipiriany sasany
OnePlus dia namoaka sary iray an'ny terminal mpamorona manaraka, ny OnePlus 2.
OnePlus One amin'ny € 249 mandrakizay sy ny firaisana amin'ny Dropbox
Ny startup sinoa OnePlus dia nanambara ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny Dropbox manararaotra ny fanambarana fa ny terminal kintana dia hitentina € 249 mandrakizay.
Fotoana izao, amidy ny OnePlus One
Fotoana hividianana ny OnePlusOne satria amin'ny varotra mahavariana mandritra ny fotoana voafetra
Ny OnePlus One dia nilatsaka tamin'ny vidiny talohan'ny nahatongavan'ilay OnePlus Two
Fitaovana sinoa vaovao. Ilay OnePlus One, hidina amin'ny vidiny alohan'ny fahatongavan'ny OnePlus Two tsy ho ela.
OnePlus Two dia azo aseho amin'ny 1 Jona
Ny terminal manaraka an'ny mpanamboatra sinoa, ny OnePlus Two, dia azo aseho amin'ny 1 Jona.
OnePlus Two dia afaka navotsotra tamin'ny 16 Jolay
Ny terminal OnePlus Two manaraka dia mety hivoaka mandritra ny volana Jolay, indrindra ny 16 Jolay.
OnePlus dia hanavao ny OnePlus One hanamboarana ny olan'ny touchscreen
Mandritra ny fiandrasantsika ny OnePlus Two, nanamafy ny orinasa fa hamaha ny olan'ny efijery mikasika ny OnePlus One.
Ny CEO OnePlus dia manamafy ny sasany amin'ireo fiasa sy vidin'ny OnePlus Two
Ny CEO an'ny OnePlus dia nanambara ny vidiny sy ny sasany amin'ireo toetra ara-teknikan'ny OnePlus Two.
Cyanogen OS 12 izao dia azo alaina ho an'ny OnePlus One [ZIP Download]
Ampidino ny Cyanogen OS 12 fanavaozana ZIP amin'ny OnePlus One anao ary hanana ny toetra tsara sy tombontsoa avy amin'ny Lollipop amin'ny telefaona Android ianao
OnePlus dia mamoaka infographic mahaliana izay anehoany ny zava-bitany
Mba hankalazana ny fahombiazan'ny orinasa dia namoaka infografika mahafinaritra mampiseho ny zava-bita tratran'ny OnePlus nandritra ny taona lasa 2014
Ny sary mihetsika boot mety an'ny OxygenOS ny firmware vaovao izay ho avy ny OnePlus One 2 dia tafaporitsaka anaty horonan-tsary
Avelanay eto aminao ny sary mihetsika OxygenOS boot an'ny firmware an'ny mety ho OnePlus One 2
Oxygen OS, ilay ROM manana OnePlus vaovao
Oxygen OS no ROM vaovao tsotra, tsy misy bloatware, ary ROM madio ho an'ny telefaona OnePlus tonga amin'ny fitaovanao manaraka.
OnePlus One dia mandray Android 5.0 amin'ny fomba ofisialy
Na dia mbola manana olana aza ilay fanavaozana satria dingana Alpha io, dia mahazo Android 5.0 amin'ny fomba ofisialy ny OnePlus One.
Moa ve ny OnePlus Two hanana slot SIM sy micro SD roa?
Ny horonantsary fampiroboroboana OnePlus dia mampiseho ny fanohanana ny karatra micro SD ho fanampin'ny SIM roa sosona. OnePlus Roa tazana?
Misy tsy misy fanasana ny OnePlus One 16 GB amin'ny vidiny 269 euro
Raha mila OnePlus One ianao, dia amidin'ny bandy ao amin'ny OnePlus aminao amin'ny alàlan'ny tranonkalany izany, tsy misy fanasana na famandrihana mialoha: mividy ianao dia entin'izy ireo mody.
CyanogenMod dia namoaka fanavaozana izay manitsy lesoka maro izay notaritaritin'ny OnePlus One, mitondra fitoniana amin'ny telefaona ity fanavaozana ity.
Ahoana ny fomba hampiasana ny baiko Hey Snapdragon amin'ny OnePlus One
Ny fanavaozana farany ny OnePlus One dia nanala ny fahaizana mampiasa ny Hey! Snapdragon. Anio dia asehonay anao ny fomba hamerenana ny safidy.
Ny OnePlus One dia nohavaozina miaraka amin'ny fanohanan'ny endrika RAW, vahaolana amin'ny olan'ny multitouch sy maro hafa
Ilay OnePlus One dia mahazo fanavaozana vaovao izay mitondra fanatsarana lehibe toy ny vahaolana amin'ny efijery mikasika, ny fanohanana ny fakana sary amin'ny maody ROW sy maro hafa
Tonga ilay OnePlus One nandrasana hatry ny ela. Fantsona misy endri-javatra tsy mampino izay maniry ny hamaky ny tsena amin'ny vidiny novaina.